Aagga koonfureed ee Chile waa lagama maarmaan in la fahmo isbedelka cimilada | Saadaasha Shabakadda
Qaybta koonfureed ee Chile waa lagama maarmaan in la fahmo isbedelka cimilada
Sida ku xusan marar badan, isbedelka cimiladu wuxuu saameeyaa gees kasta oo dhulka ah. Meelaha qaar, sababo laxiriira ama xaaladooda awgood, waxaa jira aagag aad ugu nugul saameynta isbedelka cimilada iyo kuwa kale oo aad ugu adkeysi badan.
Gobolka Chile ee Magallanes iyo Antarctica, oo ku yaal koonfurta qaaradda America, waxay bixisaa xaalado aan caadi ahayn si loo barto saameynta isbeddelka cimilada. Tani waa wax ay tahay in saynisku ka faa'iideysto si loo helo natiijooyin wanaagsan iyo aqoon ballaaran oo ku saabsan falalka iyo cawaaqibka suurtagalka ah.
1 Aagga koonfureed ee meeraha
2 Cilmi baaris ku saabsan isbedelka cimilada iyo deegaanka badda
3 Nidaamka deegaanka ee badda waa in la ilaaliyaa
4 Waxbarashada deegaanka oo ah aalad xal
Aagga koonfureed ee meeraha
Waxay ku taal meel 3.000 kiiloomitir koonfur ka xigta Santiago magaalada Punta Arenas. Waa xudunta hawlgallada sayniska ee ka hawl gala Magellan iyo Antarctica. Waa aagga koonfureed ee meeraha waxayna gaaraysaa bislaansho wanaagsan si ay u noqoto cirif cilmiyaysan oo hoose iyo Antarctic ah.
Cilmi baaris ku saabsan isbedelka cimilada iyo deegaanka badda
Ka dhigitaanka gobolladan tiir caalami ah oo cilmiyaysan iyo tiknoolajiyadeed waxay ka jawaabaysaa xaqiiqda ah in ifafaalaha xilligan ee isbeddelka cimilada uu saameyn ku yeelanayo aagagga Xarunta Cilmibaarista Dynamic ee Nidaamyada Nidaamyada Badda ee Latitude Sare (IDEAL).
Ku samaynta daraasadaha iyo falanqaynta gobolkan aragtida cilmiyaysan waxay u oggolaanaysaa helitaanka macluumaad badan oo qiimo leh oo la xidhiidha dhammaan isbeddelada ku dhacaya isbeddelka cimilada. Daraasadaha laga sameeyay gobolkan waxaa kamid ah in la ogaado sida isbedelka cimilada uu u saameeyo deegaanka badda. Kordhinta heerkulka, urursiga sare ee CO2 ee jawiga, waxay sababayaan saameyn ku yeelashada badaha. Tusaale ahaan, waxaan ka helnaa bililiqeysiga, biyo-gelinta iyo baabi'inta deegaanno ka mid ah noocyada u nugul isbeddelka deegaanka.
Si cad, Meelaha ugu nugul waa kuwa ay tahay in si faahfaahsan loo darso, maaddaama ay yihiin kuwa bixiya macluumaadka ugu badan ee ku saabsan sida isbeddelladu u saameyn karaan noocyada halkaas ku nool. Thanks to jawaabta weyn ee isbeddelada deegaanka, tijaabooyin badan iyo tijaabooyin ayaa la sameyn karaa si loo helo faham wanaagsan oo ku saabsan cawaaqibka.
Nidaamka deegaanka ee badda waa in la ilaaliyaa
Inaad natiijooyin wanaagsan ka hesho tijaabooyinka aagaggaas waxay u oggolaaneysaa mas'uuliyiinta inay gaaraan go'aanno gaar ah oo ilaalin kara noolaha badda. Haddii aan aqoon ama ka yareyn aqoonta saxda ah ee ku saabsan cawaaqibka ay saameyn gaar ah ku yeelan karto nooc, waxaan qaadi karnaa tallaabooyin aan ku ilaalineyno noocyada la yiri.
Tusaale waxaas oo dhan waa dib u gurasho baraf oo ku yaal fjords-ka aagga qaarkood. Saameyntani waxay keentaa in biyaha macaan ee aagga la dhalaaliyay ay soo galaan deegaanka badda isla markaana ay beddelaan astaamaha kiimikada iyo bayoolojiga. Noocyada u baahan xoogaa milix ah si ay u noolaadaan, ma awoodi doonaan inay ka hortagaan isbedeladan oo way dhintaan.
Maaddaama ay adag tahay in dib loogu noqdo arrimaha isbeddelka cimilada, Waxa kale ee loo baahan yahay in la qabto ayaa ah in xal loo raadiyo dhibaatooyinka soo ifbaxa. Xalal muuqda oo gacan ka geysanaya la-qabsiga bay'adaha badda si isbeddelka cimilada.
Waxbarashada deegaanka oo ah aalad xal
Waxbarista kuwa yar yar si ay u qaadaan masuuliyada deegaanka ayaa ah aalad lagu xalin karo dhibaatooyinka deegaanka ee ka dhashay isbedelka cimilada. Waa in la sheegaa in, haddii aan tababarno dad karti u leh baaritaanka, falanqaynta iyo go'aannada deegaanka u janjeedha, Waxaan kor u qaadi doonnaa wacyigelinta caalamiga ah ee ixtiraamka deegaanka. Waxaas oo dhami waxay wax ku biirin doonaan hab wanaagsan oo wanaagsan si loo yareeyo cawaaqibka isbedelka cimilada.
Haddii aan dooneyno in dhallinyaradu ay ku lug yeeshaan sayniska, waxaan u baahan nahay waxbarashada deegaanka. Xaqiiqda ah in Chile ay ku leedahay aagga koonfureed nidaamyada Antarctic iyo subantarctic ee ku habboon cilmi-baarista waxay horseedi kartaa soo if-baxa kheyraadka dalalka kale iyo hay'adaha caalamiga ah, sida ay tahay xaaladda indha indheynta woqooyiga dalka. Waqtigaan la joogo, Xarunta Cilmibaadhista Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqa Dabiiciga ah ee Latitude Marine (IDEAL) waa mid ka mid ah hay'adaha sayniska ugu firfircoon aagga, oo ay la socdaan koox ka kooban 25 cilmi baarayaal ka socda hay'ado kala duwan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Qaybta koonfureed ee Chile waa lagama maarmaan in la fahmo isbedelka cimilada
Barafka badda ee Arctic ayaa rikoorkiisii ​​hoose galay bishii Janaayo